Ilu: Nmekorita nke ndi mmadu mere ka odi mfe | Martech Zone
Ntughari: Ebumnuche nke Okike Na-eme Ka Ọ Dị Mfe
Tọzdee, Eprel 30, 2015 Tọzdee, Eprel 30, 2015 Douglas Karr
Kemgbe ọtụtụ afọ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-esote anyị, ọ na-eju m anya mgbe ọ bụla m gara ịkekọrịta ibe na Facebook na onyonyo, aha na ederede adịghị mma maka ịkekọrịta. Aga m ezere ngwa ngwa mgbe ha anaghị eji egwuregwu mmekọrịta egwu nke ọma. Mgbasa mgbasa ozi na-aga n'ihu na-abụ igwe okwu anyị maka ọdịnaya anyị mepụtara mana anyị maara na ọ ga-adị oke mma ma ọ bụrụ na ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-eso ụzọ ya ga-amafe ịpị.
Aghọtara m na ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị usoro okomoko nke ịgbanye sistemụ njikwa ọdịnaya, ma ọ bụ ọbụna ịnweta na ihe ọmụma iji mee nke ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere ya. Nke ahụ bụ mgbe ngwaọrụ dị ka Egwu bia odika. Emeputara ilu iji mee ka ndụ dịrị ndị na-eme mmekọrịta mmekọrịta - na ike ịmepụta, kesaa ma tụọ mmetụta nke ọdịnaya mmekọrịta gị site na dashboard dị mfe nghọta.
Pụrụ ịhụ ihe atụ nke ụgbọ ala logo infographic anyị kesara.
Ọ bụla nke ọdịnaya Riddle (dị ka omenala ahụ ikwu okwu) nwere ike itinye na ibe gị site na ịpị naanị ụfọdụ HTML-SEO-friendly. Uru nke ọzọ? Ozugbo agbakwunyere ya - oge ọ bụla gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị kesara ya, okporo ụzọ nje niile na-abịakwute gị, ọ bụghị Riddle.com. Iji banye, pịa “…” na akuku dị n’elu nke ọdịnaya Riddle ọ bụla, ma detuo / mado koodu HTML n’ime ibe gị ma ọ bụ biputere ya. Nke a bụ koodu maka ihe atụ anyị.
Evolution nke Car Logo: Ọkacha mmasị Gị?
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na-ele anya etu akara ụgbọ ala siri gbanwee kemgbe afọ - omume ugbu a bụ ịgụnye ụfọdụ akụkụ nke akụkụ nke ọ bụla, ọ ga-atọkwa ụtọ ịhụ ihe (ahem) na-agbada n'okporo ụzọ ahụ. Ajụjụ maka gị - olee nke n'ime ụgbọ ala ụgbọ ala ndị a kacha kọwaa akara ha?
Creatmepụta ọdịnaya gị maka ịkekọrịta kachasị dị mfe, ọbụlagodi na ngwaọrụ mkpanaka dịka a hụrụ na vidiyo a.
Tags: agwuọdịnaya mmadụihe okike mmadummekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ nkekọrịta ngwá ọrụ
Top 5 Ihe na-egbu iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa